Mandray fepetra sahy ny governemanta sinoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mandray fepetra sahy ny governemanta sinoa
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Freeland, fikambanana iraisam-pirenena momba ny fanondranana olona an-tsokosoko, dia miarahaba ny governemanta shinoa noho ny nandraisany fepetra feno fahasahiana, ao anatin'izany ny fandrarana ny varotra bibidia, mba tsy hahitana ny ankehitriny Coronavirus valan'aretina.
"Tokony hoderaina i Shina noho ny hetsika sahisahy nataony handrarana ny varotra bibidia ary tokony hampirisihinay an'i Shina hitazona izany fandrarana izany mandritra ny fotoana maharitra," hoy ny mpanorina ny Freeland, Steven Galster, izay efa 28 taona no nanadihady momba ny varotra bibidia. “Ny fandrarana maharitra dia hamonjy ain'olombelona, ​​ary handray anjara amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny biby fiompy manerantany.”
Sina no mpanjifa voalohany amin'ny bibidia, ary i Etazonia no mitana ny laharana faharoa. The Coronavirus Ny ivon-toeran'ny valanaretina dia tao amin'ny tsenan'i Huhanan Seafood any Wuhan. Ity tsena ity sy ireo menu an-tserasera azo ampiasaina eo an-toerana dia nanisy karazana biby amidy isan-karazany, ao anatin'izany ny kangaroo, amboadia, sokatra, omby, ampondra, rameva, alika ary maro hafa.
“Loza mahatsiravina atahorana ny olona manerantany, toa Coronavirus efa nifamatotra tamin'ny varotra biby teo aloha. Mila mianatra avy amin'izany isika. Ny valanaretina SARS nahafaty olona dia nalaina avy tamin'ny fihinanana civet misy varotra (biby toy ny raccoon) any Shina. Ny valan'aretina mahafaty H5N1 dia nifatotra tamin'ny vorona. Ny HIV dia nalaina tamin'ny primatiora. Ny virus dia afaka mitsambikina manomboka amin'ny biby mankany amin'ny olona. Ny lisitr'ireo valanaretina pesta dia hihalava kokoa, ary hanimba ny isan'ny olona, ​​raha mbola avelantsika hitohy ny bibidia mpivarotra. Tsy azo fehezina ny varotra bibidia ara-barotra satria ny ankamaroany dia vatsy sy entin'ny heloka bevava. ”
Vao tsy ela akory izay dia namita fanadihadiana be dia be i Freeland, ary nanambara fa ny sindika mpanao heloka bevava, ao anatin'izany ny Triads sinoa, ny heloka bevava nizeriana, ny Mafia rosiana, ny andian-jiolahim-boto vietnamiana dia manondrana ankabeazan'ny bibidia tsy ara-dalàna eran'izao tontolo izao, amin'ny fampiasana ny varotra bibidia ara-dalàna sy ny orinasa ara-dalàna hafa ho toy ny takona hialana amin'ny lalàna. . Ny varotra ara-dalàna amin'ny bibidia dia tombanana amina miliara dolara isan-taona, fa ny varotra tsy ara-dalàna dia tombanana ho 10 heny noho ny habeny.
"Tsy maintsy ialan'i Shina ny fepetra noraisiny tamin'ny SARS rehefa namono biby an'arivony izy mba hisorohana ny valanaretina," hoy i Onkuri Majumdar, Tale mpitantana ao Freeland-Asia. “Tsy helok'ireo biby izany. Raha avelantsika ho irery izy ireo dia avelao any an'ala izy ireo, tsy hisy izany valanaretina izany, ”hoy ihany izy. "Ny olana dia vokatry ny fanjifan'ny olombelona, ​​ny tsy fisian'ny fampiharana, ary ny fitiavam-bola amin'ny olombelona."
“Varotra ratsy tarehy maharary ny olona sy ny biby ity, ary tonga ny fotoana hampijanonantsika azy. Iza no tsara kokoa hitarika ny fiampangana noho ny mpanjifa voalohany eran'izao tontolo izao, ”hoy i Kraisak Choonhavan, filohan'ny Board of Freeland-Asia.
Miangavy ny Governemanta Shinoa i Freeland mba hanoherana ny fanerena tsy azo ihodivirana amin'ireo karazana tombontsoa - fananganana hatrany amin'ireo mpivarotra biby dia hatrany amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny governemanta, ary na dia amin'ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana aza-, hanaisotra ilay fandrarana raha vao voafehy ny valanaretina.
“Ataovy eo am-pelatanany ilay fandrarana, ampiharo izany, ary jereo ny fahombiazan'ny zava-boary isan-karazany”, hoy i Galster.
“Afaka ny ho lasa mpitondra vaovao i Etazonia amin'ny fiarovana ny bibidia,” hoy i Kraisak nanampy. “Mila iray isika.”